Fitsaboana oniversite ao Rosia ambony 2016 - Top fitsaboana anjerimanontolo
"EducationBro" Magazine amin'izao andro izao manomana ambony 2016 ny fitsaboana oniversite any Rosia ho anareo. Manantena izahay fa vaovao izany dia hanampy ireo mpianatra iraisam-pirenena hifidy safidy tsara indrindra ny mandalina ny fitsaboana in Rosia. MBBS antokony in Federasiona Rosiana manana kalitao avo sy iva ny saram-pianarana.
Mitady ity izahay safidy ho ambony (in nidina mba ny zava-dehibe):
Ny kalitaon'ny fanabeazana
Reviews ny vahiny mpianatra momba ny oniversite
Ny isan'ny mpianatra vahiny tany amin'ny oniversite
Modern amin'ny faritry ny oniversite sy ny fitaovana
Ny vola lany amin'ny fanabeazana
Ny tanàna izay anjerimanontolo no misy
Miely be ny vohikala sy ny ara-tsosialy pejy. Ny matetika ny fanavaozam-baovao.
Indro ny isa 8 ao amin'ny oniversite tsara indrindra ny fitsaboana ambony any Rosia 2016. izany Rostov State University Medical. Tena malaza eo vahiny mpianatra. Tena mila ankehitriny campus sy ny tranonkalany sy ny mombamomba ireo tambajotra sosialy lany andro. Ny fanabeazana tsara tsy afaka handrakotra ny zava-drehetra. University tokony hiasa eo amin'ny sary. Na dia izany aza, izany no tena tsara toerana mba hianatra medicinу any Rosia na dia Europe.
tsy misy ahiahy, Krasnoyarsk State University Medical dia iray amin'ireo oniversite tsara indrindra any Siberia (Region ny Federasiona Rosiana). Manana olana toy izany koa ho toy ny #7 ao amin'ny fandaharana ara-pitsaboana. Afaka milaza, fa anjerimanontolo manana toerana manana ny mitovy eo amin'ny fandaharana. Fa ny olona iray dia tokony ho ambony. Manapa-kevitra izahay fa tsara kokoa KrasSMU kely. Ndeha jereo ity taona manaraka.
Volgograd State University Medical Saika mitovy tahaka RSMU (#8) ary ary KrasnSMU (#7). Ireo anjerimanontolo dia saiky mitovy. Na dia mpianatra tena heviny dia similiar. Noho izany, dia afaka mifidy betweent ireo anjerimanontolo, mieritreritra ohatra, momba ny jeografia na ny toetrandro.
Be dia be ny toerana Anjerimanontolo Rosiana ara-pitsaboana tany Siberia. Ny olana dia mpianatra vahiny tsy tia Siberia toetrandro. Fa izy rehetra ireo anjerimanontolo dia mangatsiaka. Noho izany, Novosibirsk State University Medical maka #5 toerana ambony ara-pitsaboana ao amin'ny oniversite ao Rosia 2016.
4. Siberia State University Medical
Siberia State University Medical manana mitovy ny fanabeazana avo lenta toy ny teo aloha anjerimanontolo. Fa manana morden kokoa campus sy ny fitaovana. Vohikala ihany koa tsara kokoa. Foreign mpianatra tia oniversite ity, fa ny sasany amin'izy ireo tsy tia rivo-piainana ao amin'ny Siberia. Noho izany, ny safidy. Na izany na tsy, Siberia State University Medical eo amin'ny oniversite tsara indrindra any Rosia sy ny #4 in EducationBro Ranking ny fitsaboana anjerimanontolo any Rosia 2016.
3. Pavlov Voalohany Saint Petersburg State University Medical
Saint Petersburg matetika miantso ho ara-kolontsaina renivohitr'i Federation Rosiana. Ary izao no lehibe Renivohitra maro anjerimanontolo lehibe. Pavlov Voalohany Saint Petersburg State University Medical dia iray amin'ireo Anjerimanontolo. Mpianatra avy any ivelany tia azy. Tsy manana fitaovana maoderina sy ny toerana tsara tarehy tao amin'ny tanàna lehibe isan'ny toerana mahaliana. Kalitaon'ny fampianarana ihany koa dia avo. SPSMU tsara safidy.
2. -Pirenena Rosiana University Medical Research
Efa ho ny voalohany. Ny kely tsy ampy handresy. Fa misy toerana eo amin'ny fandaharana – izao no vokany tena tsara. Nihaona -Pirenena Rosiana University Medical Research #2 ao amin'ny fandaharana ny tsara indrindra ara-pitsaboana oniversite any Rosia. Mpianatra avy any ivelany tia azy. Tsy hita ao Moscow, ny renivohitr'i Federasionan'i Rosia. Na oviana na oviana ianao hahatsapa hankaleo amin'ity tanàna ity. RNRMU no tsara toerana mba hianatra ny fitsaboana any Rosia.
1. Voalohany Moscow State University Medical
Eto dia ny tsara indrindra ao Rosia anjerimanontolo fitsaboana. Io no toerana tsara indrindra na ny olon-kafa hianatra MBBS amin'ny Federasiona Rosiana. Izany no iray amin'ireo tsara indrindra eran-tany. izany Voalohany Moscow State University Medical. Izany dia vokatry ny “EducationBro Ranking ny fitsaboana oniversite ao Rosia 2016”. MSMU maka #1.